माली ध्यान दिनुहोस्: कसरी जाडो ओपेरा कार्टून अक्षर लागि तयारी छ
अनुभवी माली शरद ऋतु को आगमन संग क्षेत्र काम मा एक महत्वपूर्ण क्षण सुरु थाह छ। लगभग सबै विकास बिरुवाहरु को जाडो लागि विशेष हेरविचार र विशेष तयारी गर्न आवश्यक छ। फूल, Ornamental लागि क्रममा फल ब्रश र रूखहरू बाँकी, बल पाउन र वसन्त वृद्धि मा जान सक्छ, तिनीहरूले चिसो मौसममा विशेष हेरविचार प्रदान गर्न आवश्यक छ।
जाडो chrysanthemums लागि तयारी अगस्ट को अन्त देखि सुरु - पछिल्लो गर्मी महिना।
यो अवधि फूल खाद गर्नुपर्छ राम्ररी समयमा थियो। सबै भन्दा राम्रो मौसमी प्रयोग रूपमा ती जो पोटासियम र फस्फोरस को आधार मा उत्पादित गर्दै छन्। को वनस्पति को चिसो प्रतिरोधी विशेषताहरु सुधार गर्न - यस्तो मल को मुख्य कार्य।
दोस्रो, जाडो लागि तयारी यसलाई मात्र स्वस्थ ब्रश राख्न सिफारिस गरिएको छ, किनभने chrysanthemums र बोट को नियमित निरीक्षण समावेश छ। तिनीहरूले शरद ऋतु र हिउँदमा तापक्रम परिवर्तन गर्न थप प्रतिरोधी, राम्रो तुसारो गर्न छाँटकाँट गर्दै छन्।
तेश्रो, माली फूल को एक षड्यन्त्र मा लगाए गर्दा, यो महत्त्वपूर्ण उहाँले खातामा क्षेत्रको जमिनको अवस्था लिए, र कसरी तिनीहरू चयन प्रजातिहरू अनुरूप छ। तसर्थ, ब्रश बस excavated र वसन्त सम्म तहखाने वा अन्य गाढा र सुन्दर ठाउँमा पठाउँदा, र फूल लुकाउन खुला क्षेत्र हो र भर्खरै जब मंचन को जाडो लागि chrysanthemums को तयारी एक कट्टरपंथी हुन सक्छ।
र अन्तमा, भूल छैन जो हुनुपर्छ फूलवाला अवैतनिक वा व्यावसायिक या त थप एक चरण। यो, को पाठ्यक्रम, छाँट्ने। ओपेरा कार्टून अक्षर - stems एक मीटर भन्दा एक उचाइ पुग्न जो एक झाडी। तर जब गंभीर frosts, हावा, हिउँ र बरफ पाप्रो को वजन अन्तर्गत तिनीहरूले सजिलै बन्द, जो बिरुवाहरु को उपस्थिति बिगार्छ र चिसो सक्छ तोड्न। तसर्थ, हिउँदमा छाँट्ने chrysanthemums मात्र होइन सिफारिस - यो अनिवार्य छ! सञ्चालन प्रदर्शन गर्ने बिरूवा व्यावहारिक रस को आन्दोलन रोक्छ गर्दा: तिनीहरूले सीतनिद्रा लागि तयार छन्। सामान्यतया, यो चिसो मौसम को स्थापना संग हुन्छ, यो टिकाउ तापमान कम छ। को जाडो ओपेरा कार्टून अक्षर सफल छ लागि तयार काटन गर्दा कति सेन्टिमिटर छोड्न जमीन देखि stems? 8-10 भन्दा कुनै थप। शासन दुवै वयस्क रंग र जवान यस वर्ष एक्लै लगाए लागू हुन्छ।
जमीन मा chrysanthemums Wintering
Winterizing र खुला जमीन मा हिउँदमा chrysanthemums भण्डारण नरम र बरु कठोर जलवायु दुवै सम्भव छ। सबै को पहिलो shrubs वरिपरि राम्रो podgresti ध्यान पहाडी भूमि आवश्यक छ। , अन्यथा माटो दलदल परिणत गर्न सुरु हुनेछ stems नजिकै pits काम गरेन राख्न प्रयास गर्नुहोस्, र जरा rotting छन्। र पनि चिसो जमीन promorznet मा, जो पनि एक झाडी को मृत्यु नेतृत्व एक पाप्रो, ढाकिएको छ। तपाईं एक जाडो नरम, भारी snowfall, chrysanthemums छ र यदि राम्रो यसलाई अन्तर्गत लुकाउन हुनेछ। अन्य अवस्थामा, को ब्रश अतिरिक्त shelters निर्माण गर्न आवश्यक छ। यो जो अत्यधिक चिस्यान विरुद्ध सुरक्षा, बगाएको हुन सक्छ, इन्सुलेशन वा खसेको पात, पराल, घास को ढेर लागि FIR शाखा को "पाल"। तर पीट, sawdust - आश्रय लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सामाग्री छैन। तिनीहरू पनि चिस्यान अवशोषित र uprevaniya ब्रश गर्न सक्छ। संयंत्र खन्नुहोस् र वसन्त कतै एउटा सानो खाडल खन्न सक्नुहुन्छ सम्म यो भण्डारण गर्न भने, जमीन पाउडर को जरा मा माटो को clod, माथि कभर स्लेट, काठ बोर्ड वा फलामको पाना, र त्यसपछि संग ब्रश राखेँ। वसन्त ओपेरा कार्टून अक्षर बाहिर निकाल्न र पुन: लगाए।
यहाँ यस्तो हेरविचार यो सुन्दर आवश्यक छ गिरावट रंग!
एक छान्ने टमाटर - बिरुवा को खेती मा एक महत्वपूर्ण चरण
Yucca, पहेंलो पात, "किन" र के गर्न?
रूखहरू kronirovaniye: उद्देश्य, प्रकार र विधिहरू
को दाखको बोट को गठन। गठन दाखको बोट को विधिहरू
Rhododendrons, चिसो-प्रतिरोधी प्रजातिहरू: वर्णन, विशेषताहरु, प्रकार, खेती र समीक्षा
अमेजन लिली - एक नाजुक र सुन्दर फूल
संरचना र मानव मांसपेशी को समारोह
एक बच्चाको रूपमा ठेउला प्रकट। लक्षण र उपचार
मूल प्रकार सबै अवसरका लागि shnurovok
Crochet मुकुट। मुकुट लागि हुक र यार्न
जापानी मास्क। hyaluronic एसिड मास्क लगाएको
"TEFAL" प्यान गैर-स्टिक कोटिंग संग: वर्णन, दृश्य र समीक्षा
आफ्नै हातमा "Passat बी 3" (वोक्सवैगन Passat बी 3) ट्युनिङ
"दूध संस्कृति" एक विकासशील आधुनिक उद्यम हो
ओडेसा लोकप्रिय आकर्षण: तस्बिर र समीक्षा
एन्थ्रेसाइट (हार्ड कोइला): विशेषताहरु र उत्पादन ठाउँ